ရှညောသား: February 2013
စာရေးသူ ရှညောသား at Friday, February 22, 2013 1 comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ဒီနေ့ညနေအတန်းချိန်နောက်ကျလို့ ကျောင်းကပြန်ရောက်မှပဲ မြန်မာကပါလာတဲ့ ငါးပိရည်ထုပ်လေးဖျော်ပြီး ခရမ်းသီးပြုတ်၊ပဲစောင်းလျားသီးပြုတ်၊ရေနွေးလေးနဲ့ညနေစာကို လွေးလိုက်ပါတယ်။ သြော်..ကျန်သေးတယ်ဗျ စီနီယာ အစ်မတစ်ယောက်ဆီက ဗူးသီးဟင်းခါလေးလည်းပါသေးတယ်။ကျောင်းကအပြန်ဆာဆာနဲ့ အားပါးတရ လွေးလိုက်တာ ပုံထဲက ထမင်းပန်းကန် တက်တက်စင်အောင် ပြောင်သွားတာပဲ။ အသားဟင်း မပေမဲ့ ထမင်းမြိန်တယ်ဗျာ။ ရွှေညာသားလေး ထမင်းစားရင် ရေနွေးကမပါမပြီး ရေအေးကိုမသောက်ဖြစ် တာကြာပြီ။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီလား မညီလားတော့ မပြောတတ်ဘူးဗျာ။ ရေနွေးသောက်ရတာကို အတော် ကြိုက်တယ်။
ကော်ဖီကြိုက်တဲ့သူများလိုပဲ ရေနွေးလေးမှမသောက်ရရင် တခုခုလိုနေသလိုခံစားရတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီကိုလာကတည်းက လဘက်ခြောက်ကို သတိတရနဲ့သယ်လာခဲ့တယ်။ အမေကလည်း သေသေချာချာ ထုပ်ပြီးထည့်ပေးလိုက်တယ်ဗျ။ ဒီမှာက ရေနွေးသောက်သူနည်းတော့ လဘက်ခြောက်သိပ်မရှိဘူး။ သတို့တွေက မနက်အစောလည်း အအေးပဲသောက်ကြတယ်။ စားတော့အသား သောက်တော့အအေး ဒါကြောင့် သူတို့လူမျိုးတွေကြည့်လိုက်ရင် ပ်ိန်တဲ့သူက ခပ်ရှားရှားဗျ။ ကျုပ်အတွက်ကတော့ အိမ်မှာစားဖြစ် ရင် ရေနွေးက အမြဲတမ်းပါတယ်။ ဒါကြောင့်လားမသိဘူး လူကအဆီတွေကျပြီး ပိန်ထှာဗျာ။ စိတ်ထောင်း ကိုယ်ကျေဆိုသလို စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်လည်း ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ တွေ့တဲ့သူတိုင်းကပြောတယ် ပိန်လို့တဲ့။
အသားဟင်းမပါပေမဲ့ ထမင်းမြိန်တဲ့ ညနေစာပါ...သုံးဆောင်ကြပါအုံးဗျာ။ ငါးပိရည်ကျိုကတော့ အသင့်စား အထုပ်ကိုဖျော်ထားတာမို့ ခက်ခက်ခဲခဲမဟုတ်ပါဘူး...။
စာရေးသူ ရှညောသား at Friday, February 15, 20134comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ဒီကိုရောက်ကတည်းကမြန်မာအစားအစာလေးတွေမစားဖြစ်တာကြာလို့ ဒီနေ့တော့အမေထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ချဉ်ပေါင်ရွက်ခြောက်လေးတွေကိုသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လက်ဆောင်ပေးထားတဲ့မျှစ်လေးနဲ့ရောပြီးကြော် စားပါတယ်။ မစားရတာကြာလို့ထင်တယ်ဗျာ ကောင်းချက်တော့ မပြောပါနဲ့။ ထမင်းစားတိုင်း အိမ်ကိုသတိရ လို့ မျက်ရည်က၀ဲမိသေးတယ်။ အိမ်မှာဆို ညီအစ်ကိုတစ်တွေ ထမင်းဝိုင်းဖွဲ့စားရတာ အတော်ပျော်ဖို့ကောင်း တာဗျ။ အဖေနဲ့ကျုပ်တို့ ညီအစ်အကိုတစ်တွေက ထမင်းစားပွဲမှာဝိုင်းဖွဲ့လို့ အမေကတော့ ထမင်းအိုးဟင်းအိုး နားမှာ ကျုပ်တို့အတွက်ခူးခပ်ပေးရင်း ထမင်းအိုးဟင်းအိုးနားမှာပဲ စားတော့တယ်။ အဖေနဲ့သားတွေ ထမင်းဝိုင်းထဲကိုမ၀င်တော့ဘူး။ တစ်ခါတစ်လေတော့ အမေ့ကိုထမင်းဝိုင်းထဲ ၀င်ခိုင်းပြီး ကျုပ်က ထမင်းအိုးဟင်းအိုးနားမှာ ခူးခပ်ပေးပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကဆို ထမင်းစားရတာ အတော်လေး ပျော်ဖို့ကောင်းတာ။ ချဉ်ပေါင်ဟင်နဲ့ငရုတ်သီးထောင်းဆိုလည်း ထမင်းတစ်နပ်တော့ပြီးသွား တာပဲ။ အခုအဝေးကိုရောက်နေချိန်ကျတော့ အဲ့ဒီလိုဟင်းလေးတွေကို အရမ်းတမ်းတမိတယ်။ ဆီမပါပေမဲ့ အမေကိုယ်တိုင်ချက်တဲ့ဟင်းမို့ အရသာရှိလှတယ်ဗျ။
တစ်ရက်တုန်းကဆို မုံလာရွက်ချဉ်ရည်ဟင်းလေးချက်နေရင်း အိမ်ကိုသတိရလို့ ငိုချမိတယ်ဗျ။ အဲ့လိုဟင်းလေးတွေ ချက်ချက်စားတိုင်း အိမ်ကိုလွမ်းတဲ့စိတ်တွေက ဘယ်လိုမှတားဆီးလို့ မရဘူး။ အရင်တစ်ခေါက်တုန်းကတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူနေတာမို့ ဖြေသာနိုင်သေးတယ်။ အခုကတော့ တစ်ယောက်ထဲဆိုတော့ အတော်ကိုဆိုးပါတယ်။ အမေ့နဲ့ဖုန်းဆက်တိုင်းလည်း ပြောပြဖြစ်တယ်။ အမေကတော့ ဟုတ်မှာပဲလူလေးရေတဲ့။ အမေလည်း ထမင်းဝိုင်းထိုင်တဲ့အခါတိုင်း လူးလေးတို့ကို ထမင်းဝိုင်းထိုင်တဲ့အခါတိုင်း သတိရတယ်တဲ့။ တကယ်ပါဗျာ ဘ၀ရှေ့ရေးအတွက်ဆိုပြီးသာ ရေခြားမြေခြား ကိုလာပြီး ပညာသင်နေရတာ။ ကိုယ့်မြေကိုယ်ရေမှာလောက်တော့ ပျော်ရွှင်မှုမရှိတာအမှန်ပဲ။ စိတ်ကို အတော်လေးထိန်းရတယ်။
ချဉ်ပေါင်ကြော်အကြောင်းကနေ ဘယ်တွေကိုရောက်ကုန်လဲမသိတော့ဘူးဗျာ။ ချဉ်ပေါင်ကြော်နည်း ကတော့လွယ်လွယ်လေးမို့ အထူတလည်မပြောပြတော့ဘူးဗျာ။ အခုဟာကတော့ အရွက်ခြောက်ကို ကြော် ထားတာမို့ မကြော်ခင်ချဉ်ပေါင်ရွက်ခြောက်တွေကို ရေနွေးလေးနဲ့စိမ်လိုက်ပါတယ်။ မျှစ်ကိုအရင်ကြော် ပြီးမှ ချဉ်ပေါင်ရွက်ရေစိမ်ပြီးသားကိုထည့်ပါတယ်။ အိုးကို မီးဖိုပေါ်ကချခါနီးတော့ ငရုတ်သီး၊ ကြက်သွန်ဖြူ နဲ့ နံနံပင်လေးအုပ်လိုက်ပါတယ်။ ချဉ်ပေါင်ကြော်နဲ့ တွဲဖက်စားဖို့ကတော့ ပဲဟင်းချိုးလေးဆို သိပ်ကောင်း တာပေါ့။ ကျုပ်ကတော့ ပဲဟင်းထပ်မချက်ချင်တော့တာနဲ့ ရေနွေးလေးတည်ပြီးတော့ပဲ အရည်သောက်လုပ် လိုက်ပါတယ်။ ထမင်းပူပူလေးကို ချဉ်ပေါင်ကြော်ပူစပ်စပ်လေးနဲ့ တွဲပြီး ရေနွေးပူပူလေး သောက်လိုက်တော့ ထမင်းတစ်နပ်က ပြီးဆုံးသွားတယ်ဗျာ။ တစ်ယောက်ထဲစားရတာဆိုတော့ ထမင်းပွဲကို သေချာမပြင်တော့ ဘူး။ ထမင်းပန်းကန်ထဲမှာပဲ ဟင်းကိုလည်းပုံပြီးတော့ ရေနွေးခွက်လေးနဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ ထိုင်စားလိုက်တယ် မဟုတ်ရင် အိမ်ကိုသတိရလွန်းလို့ဗျာ။ တစ်ယောက်ထဲနေရတဲ့ဘ၀က အတော်ကိုဆိုးတာပဲ...။
အားလုံးပဲ ဘေးဘယာဝေးကွာပြီး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာရှိကြပါစေ...။
စာရေးသူ ရှညောသား at Saturday, February 09, 2013 1 comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ကြက်ဥပြုတ် ရောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်... ကြက်ဥပြုတ်အကြောင်းလေးပြောချင်လို့ပါ...။ဒီနိုင်ငံကလူတွေများ ဘယ်လောက်အကြင်နာတရားကင်းမဲ့သလဲမမေးနဲ့ ကြက်ဥစားတာတောင် အကောင်ပါတာကိုမှ ပြုတ်စားသတဲ့ဗျာ...။ စသိတုန်းက တော်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်မိတယ်ဗျ။ ဒီအတိုင်း အကောင်းမဖြစ်ခင်စားတာတော့ ကျုပ်လည်းစားပါတယ်။ နောက်ပြီး အစာနဲ့ဥတဲ့ကြက်ဥဆိုတော့ အကောင်မပေါက်နိုင်လောက်ဘူးထင်လို့ စိတ်ချလက်ချစားပါတယ်။ ကြက်ဖနဲ့ကြက်မပေါင်းဖက်ပြီးလို့ ရတဲ့ဥဆိုရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့။ အခုဟာက အဲ့ဒီအဆင့်ထက်ကျော်လွန်ပြီး ကြက်ပေါက်စလေး အကောင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကို ပြုတ်စားကြတာတဲ့ဗျ။ ရွှေညာသားလေးက ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ယောက်ဖြစ်တာမို့အဲ့လိုပြောသံကြားတာနဲ့တင် ကြက်သီးမွေးညှင်းထမိတယ်။ ကြက်ဥထဲမှာ ကြက်ကလေးအကောင်ဖြစ်စ(၇)ရက်သားကိုပြုတ်စားကြတယ်။ နောက်တစ်ခုက (၁၄) ရက်သားကို ပြုတ်စားတယ်။ (၁၄) ရက်သားဆိုရင်တော့ ကြက်ကလေးက တော်တော်ကို အကောင်အထည်ပေါ်နေပြီပေါ့...။ အသက်လည်းဝင်နေလောက်ပြီ ဒီအခြေအနေမျိုးရှိတဲ့ ကြက်ဥကို မီးဖိုပေါ်တည်ပြီးပြုတ်တော့ အထဲကကြက်ကလေးရဲ့ဒုက္ခတွေးသာကြည့်ကြပေါ့ဗျာ။
ဒီပုံကတော့ ဂူဂယ်ကရှာထားတာပါ....အတူတူပဲ အဲ့ပုံစံလေးတွေ
သူတို့ဆီမှာ ညနေဆိုရင် စက်ဘီးနဲ့လှည့်ရောင်းတယ်ဗျာ။ တခြားစီးပွားရေးလေးများလုပ်စားကြပါလားနော်...။ ဒီလိုဆို ကျွဲ၊နွား၊ကြက်၊၀က် သတ်တဲ့သူတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲမေးကောင်းမေးမှာပေါ့။ ဗုဒ္ဓဘာသာအရ စဉ်းစားရင် သူများအသက်သတ်တာမို့ ဘယ်ဟာမှတော့မကောင်းပါဘူး။ ကျုပ်ဒီနိုင်ငံကိုရောက်ခါစကဆို တော်တော်လေးကိုအံ့သြတာ။ သူတို့အစားအသောက်ကဘယ်လိုကြီးလဲပေါ့။ဒါကို ဆရာမနဲ့ပြောဖြစ်တော့ သူကပြောသေးတယ် အိပ်ရေးပျက်တဲ့သူတွေ အတွက်ကောင်းတယ်တဲ့။ ညအချိန်မတော်အထိစာကျက်တဲ့ကျောင်းသားတွေ စားသင့်တယ်လို့အကြံပေးသေးတယ်။ ငါတော့ အားမပြည့်လည်းနေပါစေ စားတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ ဆရာမက သူလည်းစားတယ်တဲ့။ ကောင်းတယ်ဆိုပဲ။
ကျုပ်ကတော့အသံကြားရင်ကို အံချင်လွန်းလို့။ စားဖို့ဝေးစွ သူများစားတာမြင်ရင်ကို ကြက်သီးထလွန်းလို့ပါဗျာ။ ဒါကို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က အခန်းကိုလာလည်ရင်း အဲ့ဒီကြက်ဥတွေ လေးလုံးဝယ်လာတယ်။ မင်းတို့ရောစာဖို့တဲ့။ တော်ပြီငါတို့ကမစားချင်ဘူးလို့ စားလည်းမစားရဲဘူးလို့ငြင်းလိုက်တယ်။သူကတော့ ကျုပ်တို့ရှေ့မှာတင်ကြက်ဥကိုခွဲပြီးတော့ တစ်ဆင့်ချင်းစားပြနေသေးတယ်။ပါးစပ်ကလည်း အရသာရှိတယ် yummy yummy တဲ့။ အများကြီးစားရင်တော့ ခေါင်းကိုက်တယ်လို့ပြောတယ်။ ကိုလက်စ်ထရော ပါဝင်မှုများလို့တဲ့။ ဒါတောင်သူတော့နှစ်လုံးကုန်အောင်စားတယ်။ တကယ်ပါ သူစားနေတာကိုကြည့်ပြီး ကျုပ်ခေါင်းက ကြီးကြီးလာတယ်။ ပြန်တော့ ကျန်တဲ့နှစ်လုံးကို ကျုပ်စားဖို့ဆိုပြီးထားခဲ့သေးတယ်ဗျာ။ ဘယ်ရမလဲ အောက်ထပ်က အဆောင်စောင့်ကိုသွားပေးလိုက်တယ်။
မစားရလို့ အဟာရမဖြစ်ရင်လည်းနေပါစေ...။ဒီလိုမျိုးကြက်ဥပြုတ်တော့ မစားပါဘူး။စားချင်သပါ့ဆိုရင်တော့ ပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း သေချာလေးကြည့်ပြီးတော့ စားသင့်မစားသင့်ဆုံးဖြတ်နော်။ အခုဒီပို့စ်ရေးနေတုန်းကို အဆောင်အောက်လမ်းပေါ်က အော်သံကြားလိုက်ရသေးတယ်ဗျ။ "ဘလို ဘလို” တဲ့ သူတို့ဘာသာစကားနဲ့အော်တာ။ ကြက်ဥဖြစ်ရတာတောင် နိုင်ငံနဲ့လိုက်ပြီး အပြုတ်ခံရတာက ကွာသေးတယ်...။မြန်မာပြည်ကကြက်ဥလေးတွေ ကံကောင်းတယ်နော်...။ဗဟုသုတအဖြစ်တင်လိုက်တာပါ...။ စားချင်သပါ့ဆိုရင်တော့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ မနီလာမြို့ကိုသာ လာခဲ့ဗျာ...။ ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ ကျန်သေးတယ် နောက်တော့ဆက်ပြောပြအုံးမယ်...။
စာရေးသူ ရှညောသား at Sunday, February 03, 20132comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
စာရေးသူ ရှညောသား at Saturday, February 02, 20130comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook